Kabary famangiana manjo | Ministère de la Culture et du Patrimoine
Mpamangy : Akory avy izato ianareo, tompoko.
Vangiana : Indreto eto ihany izahay, tompoko.
Mpamangy : Avy mamangy amin’ny fahoriana, tompoko.
Vangiana : Misaotra indrindra, tompoko, ho tahian’Andriamanitra
Mpamangy : Amin’izao fahoriana midona aminareo izao ka namoizana ny hava-malala, dia tonga eto izahay, tsy iza fa ny namana sy tapakareo ihany. Ialanay tsiny, tompoko, fa misy ireo namana izay tsy tonga eto noho ny adidy aman’andraikitra maro nitana azy ireo ; koa manolotra ny fialan-tsiny amin’ny anaran’izy ireo izahay. Tonga izahay tsy hamendrofendro na handatsa-dranomaso, fa tonga hitondra ny teny fampiononona, hanatanteraka ny tenin’ny Tompo manao hoe : «Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha mitomany amin’izay mitomany» (Rom 12 : 15). Mafy tokoa izao fahoriana midona aminareo izao satria folaka andry niankinana, toro vato fandiavana ny ankohonany, ary potraka fefy mpanohan-drivotra ny fianakaviana. Efa nataonareo avokoa ny alanenina rehetra (raha nisy) nefa mahery fisintona ny fahafatesana. Izao no lahatra ka afaka ho aiza moa ! Tsara zara ny fahafatesana ka samy manana iray avy.
Vangiana : Eny, tompoko, mafy tokoa izao fahoriana mihatra aminay izao ka mila tsy ho zaka fa olombelona moa, nefa izao fanotronanareo manao tongotra miara-mamindra sy tanana miara-mandray ary fo miara-mitempo aminay izao, dia manamaivana ny fahoriana tokoa. Izao no tonga amin’ilay fitenenana hoe : «Ny hanin-jaray mora lany, ny entan-jaray mora zaka ary ny fahoriana iaraha-mitondra maivana.» Maivana ny fahoriana noho ny fanontronanareo. Faly ny fonay, tsy ny maty akory no mahafaly fa ny fahatsapanay fa tsy irery izahay amin’ny fitondrana ny fahoriana, koa misaotra anareo indrindra, tompoko.
Mpamangy : (miara-miteny) : Aza misosoka alahelo intsony, tompoko.
Vangiana : (miara-mamaly) : Misaotra indrindra, tompoko.
Mpamangy : Manaraka izany, araka ny fomban-drazana izay hita fa tsara ny hanohizantsika taranaka ankehitriny azy, dia manolotra variraiventy kely voarambin’ny tanana ho solon-dranombary tsy masaka ho an’ny velona sy singan-dandy hampombaina ny maty. Kely dia kely ny vitanay nefa manantena izahay fa tsy hijery tarehim-bola ianareo fa ny tarehim-pihavanana izay efa nampifamatotra antsika no jerenareo. Enga anie ka tsy ny ratsy toy izao intsony no hifanodiavantsika fa ny tsara indray amin’ny manaraka. Koa mahereza, tompoko.
Vangiana : Misaotra, tompoko, tsy nanadino ny soa nifanaovana. Ny teny mamy avy aminareo dia toy ny fanilo manazava ny aizim-pitom-pahoriana ; ka na manonja aza ny fahoriana dia maivana izany noho ny fampaherezana nataonareo, na mafaitra aza ny alahelo dia mamy aminay kosa ny teny fampanantenana avy amin’ny Soratra masina nambaranareo. Tsy nionona tamin’izany anefa ianareo fa mbola narahinareo vola aman-karena ihany koa, ho solon-dranombary tsy masaka ho an’ny velona sy ho singan-dandy hamatorana ny maty ; heni-kaja ny velona ary ho tsara levenana ny maty, tompoko. Enga anie ny kitapo nialan’izao mba honeran’Andriamanitra avy zato heny, arivo tsy manam-pahataperana. Mamerina ny fisaorana, tompoko.
Mpamangy : (mangata-dalana)
Vangiana :Tsy misy tsiny ny amin’izany, tompoko, fa omen-dalana ianareo. Ny eto adidy, ny any andraikitra, koa mahavità soa aman-tsara izay adidy mbola ho tanterahina. Misaotra tompoko.
Fanamarihana : (Mifandimby mandray tanana ny vangiana ny mpamangy, sady mampahery azy ireo hoe : “Aza misoso-pahoriana intsony”, na “aza misosoka alahelo”, na “mahereza tompoko”. Dia valian’ny mana-manjo hoe : “Misaotra, tompoko”.)
KABARY FISAORANA NY MPIANDRY RAZANA
TARI-DRESAKA SY AZAFADY : Tompokolahy sy tompokovavy, ny mipetraka tsy laina ary ny mitsangana tsy zoto. Noho ny entana natao tsara fehy sy ny teny natao laniera dia mijoro eto anatrehanareo ny tenako. Tsy satrim-pangady ny hitrandraka andrin-tany matevina fa asesiky ny zarany harahara. Tsy nahim-pon’ny antsy ny hikapa taola-mahery fa atosiky ny tana-mandrasa, ary tsy ditrako na haitraitrako no hitenenako eto fa noho ny adidy sy ny andraikitra izay tsy azo ifidianana, koa nataon’ny fianakaviana ho manana anjara tsy fidiny aho raha notolorany fitenenana. Ny farara feno rano, hono, tsy maneno, ny mangidy vava tsy mahatelin-kanina, ny maty omby tsy mahay mandrasa ary izay nidonam-pahoriana tsy mahaloa-peo. Koa manao azafady raha hiteny eto anoloanareo fa ny azafady mariky ny fanajana sy fanomezam-boninahitra. Manao azafady manembana tompokolahy, manao azafady misalovana tompokovavy, manao azafady raha hiteny mialoha anareo kiady sy voninahitra rehetra.
FIALAN-TSINY : Manaraka izany, miala tsiny ny tenako satria ny tsiny maiva-mavesatra, tsy zakan’ny teo aloha ka ombako tsy mahazaka ihany koa. Ny tsiny tahaka ny antsy , ka izay mikasika azy no maratra, toy ny tevan-dalina ka tsirihana mahafanina, ianjerana mahafaty, ary ny miteny tsy miala tsiny savihan-doza amin’izay atao rehetra. Noho izany ny alàna ihany no mahatsara azy. Koa lalao mandrakariva àry ny fifankatiavana, fa raha izany no voatana dia hiala amin’ny nahiny toy ny ampango tra-maraina ny tsiny amam-pondro.
RANJANY (Fisaorana) : Raha afaka ny tsiny fanalan’ny vava, fongotra ny fondro fanalan’ny molotra dia mazava ny lalan-kizorana, maivana ny teny hambara. Koa izao no tenin’ny fianakaviana tompoko : misaotra anareo tonga miarak’ory aminy, tonga ianareo nidodododo, tsy nahalavi-tany, nandao tokantrano sy fandria-mafana, nahafoy ny torimaso mamy ka niharitra ny hatsiaka mamanala eto aminay. Misaotra anareo izahay fa tsy nataonareo ho toy ny vato latsaka an-kady, tsy navelanareo handry tsy milafika na hiloloha vato tsy mihalana ; fa tonga ianareo manao tongotra miara-mamindra sy tanana miara-mibata ary fo miara-mitempo aminay. Mafy tokoa izao fahoriana mihatra izao, nefa ny fanotronanareo dia manamaivana ny fahoriana tokoa. Ka hoy ny tenin’ ireo tapa-porohana sisa tsy may manao hoe : “Ho fary tsy laitram-positra, hono, ianareo tompoko, ho akotry tsy ho laitram-parimbona, ho mamy tian’ny vola, hangidy lavitry ny faty, ary enga anie, hono, ka tsy ny ratsy toy izao intsony no hifanodiavantsika fa ny tsara indray amin’ny manaraka.
FAMARANANA SY FILAZAM-BAOVAO : Koa satria efa misasaka ny alina ary efa tazana somary reraka ihany ireo raiamandreny, ao ihany koa ny fahasalamana izay samy manana ny azy, ao ny mpiasa sy mpianatra izay samy mbola hamonjy ny asa aman-draharaha sy ny fianarana. Koa izay tsy maintsy hody hamonjy ny fodiana dia omen-dalana ho tonga soa any an-tokantrano, tsy omen-tsiny tsy arahim-pondro satria ny eto adidy ny any andraikitra. Koa ny handeha an-tongotra tsy ho solafaka an-dalana na ho tafintohana am-pandehanana. Ireo izay handeha fiara tsy ho azon-tsampona, ary izay mbola afaka hijanona handaoka ny alina eto kosa dia hananterana ny fisaorana. Ary farany indrindra, tompoko, toy izao ny fandaharam-potoana amin’ny fandevenana rahampitso. Ny razana dia ho fonosin-damba amin’ny (10) ora. Hiala eto am-bohitra amin’ny (12) ora. Entina hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ao amin’ny Fiangonana…(…) mialoha ny ametrahana azy eny amin’ny fasandrazany eny an’ A…(……) Ny fianakaviana dia efa nanomana fiara iombonana ho an’izay afaka handevina ka ny saran-dalana mandroso sy miverina dia …(……) Ariary. Koa iangaviana hisoratra anarana mialoha izay maniry hanatanteraka izany. Izay no hafatra nampitondrain’ny fianakaviana koa misaotra indrindra tompoko.
KABARY HIAINGA HANDEVINA
Rehefa voafono ny razana ary efa avy nisakafo ny olona handevina, dia tanterahana ny fotoam-pivavahana mialoha ny hivoahan’ny razana. Rehefa izany dia miandry ao ivelan’ny trano ny olona. Avoaka ny razana ka ny tongony no mandeha aloha. Milahatra eo akaikin’ny tranovorona ny fianakaviana.
TARI-DRESAKA sy FIALAN-TSINY : Tompokolahy sy tompokovavy. Manao azafady aho raha mijoro eto. Tsy fifaliana mantsy no hitenenana fa fahoriana ka avy hilamina toa volan-tsinana aho ary tonga mangina fa tsy hivatravatra noho ny voninahitrareo. Tsy ny maranitra hadidy akory na ny malady havanana, fa tsy kabary an-danonana akory ity ka hanao sampin-kavia sy hamolahana fola-droa, fa lahateny vontom-pahoriana sy toy ny hazakazaka ambany farafara, ka ny loha feran’ny avo ny tratra feran’ny iva hitraka sakanan’ny fahoriana, hiondrika tsy avelan’ny adidy. Koa miala tsiny, tompoko, fa jemby ny maso ary vahotra ny vava fa fandrotrarana an-tanàna haolo aho ka mandimby anaran-dray tsy satry…
RANJANY : Vory maro ianareo vahoaka satria folaka ny andrarezina, tapaka ny andry fiankinana ary toro ny vato fandiavana ireo tapaporohana sisa tsy may….Raha tonga teto an-tany Itompokolahy Ra………..dia olom-bitsy no tonga niarahaba azy fa izao raha mandao ny fiainana an-tany izy fa ho any amin’ny varo-tsy mimpody dia mangoro-potsy ny tanàna satria vory ny lafy valo. Nandao ny firiariavana teto amin’ity vohitra ity izy ka nanjary singany ny vady andefimandry, kamboty ny zanaka ary manjionjiona ny fianakaviana sy ny havana aman-tsakaiza….Hanao veloma farany azy no ahavoriantsika rehetra eto amin’ity tanànany ity, izay nivoahany maraina sy nodiany hariva….Nandao ny tanànany izy ka tsy hitampody fa hodimandry…..Mivoaka ny varavaran-kazo ka hiditra amin’ny varavaram-bato, koa maniry fiononana ho an’ny vady aman-janany sy ny fianakaviana isika.
FISAORANA sy TSODRANO : Manaraka izany, misaotra antsika izay tonga nampiseho fiaraha-miory ka nitondra teny fampiononana sy fampaherezana, nampiarahina tamin’ny fao-dranomaso ho an’ny velona sy kofehy ampombaina ny maty….Enga anie samy ho ela velona ka ho ambinim-bavaka, koa raha mitoetra tsy ho diso zava-tsoa raha mandeha harahim-pahasoavana.
FAMARANANA sy FANDRAVANA : Ankehitriny ary, hiainga ny razana, efa tafiditra ao anaty fiara avokoa ireo mpandevina rehetra. Alohan’ny hametrahana azy eny amin’ny fasan-drazany eny an’A……. dia mbola hoentina ao amin’ny fiangonana an’A………ny nofo mangatsiakany hanomezam-boninahitra an’Andiamanitra. Ho an’izay maniry hanatrika izany sy hanatanteraka ny fandevenana dia mbola misy ny toerana, ka ny saran-dalana mandroso sy miverina dia …….Ariary, ho an’ireo izay tsy afaka kosa dia tsy omen-tsiny, fa ny mijanona tsy laina ary ny mandeha tsy zoto.
TARI-DRESAKA sy ALASARONA : Midona midona ny oran’Ankaratra, alofan-drahomainty mitatao IMANGA, fa ny don’oran’Ankaratra ry lahy toa feon’ireo nodimandry ary ny tatao rahonan’Andringitra rey roy toa tandindon’ireo efa nafoy. Manao azafady tompokolahy sy tompokovavy fa ny ombimanga manimbolo miankandrefana, hono, manina an’i Bongolava kijàna nahabe, ny akoholahy maneno an-tsena, tsy hery na tanjaka fa mahatsiahy ny fisoko nilaozana, fa izaho kosa raha mitsangana eto, dia mitsanga-tsy zoto miteny tsy fidiny, ka vahotra ny vava miambatra ny lela satria tsy sahoby no hijoroana fa fahoriana.
AZAFADY : Ireo ianareo Raiamandreny lolohavina an-tampon’ny loha, indrindra ianareo hitoeran’ny voninahitra sy tompon’ny haja tokony hitondra ny fitenenana, ao ihany koa ireo zandry mahaleo mahalasana rehetra, sakeli-mihoa-joro saonjo mihoatr’akondro, ary tsy hadino ianareo Andriambavilanitra izay atao amparam-pilazana nefa fara-tampom-boninahitra. Hiteny alohanareo ireo ka manao azafady.
FIALAN-TSINY : Manaraka izany dia miala tsiny aho raha hiteny, fa ny miteny tsy afa-tsiny mahabotry terak’omby, mahafohy tera-bary, mahakely vodisaonjo, mahakizo fara, ary mahafolaka an-datony, Ny tsiny tahaka ny rambaramba mihazo fidinana, ka raha mitandrevandreva-pandady tsikalana sy goragora fandrirotra tady, mialoha ny fasan-kasaina. Ny tsiny toy ny androngo roa rambo sy tsatsa-droa hoho, tsy vitan’izay ratsy fiseho fa fambara loza amin’ny tany ihany koa. Noho izany, ny alàna ihany no mahatsara azy. Alàko fahavaratra ary ny tsiny ho kaohin’ny riaka, alàko ririnina ho kikisan’ny fanaka, alàko amin’ny antoandro halazon’ny andro, halàko amin’ny alina tsy hahita lalan-kiverenana intsony.
FIALAN-TSINY AMIN’NY ATAO : Resaka ihany anefa izany ka resaka, teny ihany ka teny, fa na ho lany andro hamiravava ny tsiny eto ary isika kanefa ny atao tsy metimety ihany, tsy tsara tsy ratsy toa andro ririnina dia hiverina amintsika ihany ny tsiny. Noho izany manaova ny marina, mifankatiava dia hisaraka tsy kapaina toy ny lanitra sy ny tany isika sy ny tsiny.
TETEZAMITA : Izay no ela, tompokolahy sy tompokovavy, kanefa ela tsy azo nolalovam-potsiny fa saran’ny lalana sy voha vavahady hirosoana amin’ny anton’izao mahavory ny ambanilanitra izao.
RANJANY : Tsy inona akory fa nodimandry Itompokolahy RA…………………….izay amontana haingon’ny vohitra, voarabe endriky ny saha, raiamandreny lehibe iombonana. Ditsoka ny maso ka mitanondrika ny loha, tapaka ny tongotra ka mitolefika ny famindra satria lasa ilay andry niankinana. Toro vato fandiavana ny ankohonany, rovitra sarotro fialofana ny fianakaviana, potraka fefy mpanohan-drivotra ny andefimandriny ary very namana sy nilaozan-tsakaiza tiana ireo akanga sisa nanamborana. Very fanahy mbola velona toy ny valala voatango e ! Ka hoy ny fidradradradran’ny fo nilaozany manao hoe : Veloma ry lalam-be miantsinanana, masina ry lalam-be miankandrefana, soava tsarà ry lalam-be mianavaratra, mampamangy ry lalam-be mianatsimo fa Itompokolahy RA……. tsy ho any intsony. Veloma ry vavahady izay nidirana sy ny trano nitoerany, masina ry vady aman-janany izay nitsabo sy namadibadika, veloma ireo havana tsy nahafoy sy sakaiza tsy nahasaraka, fa veromanga noseranin-dambo RA……………..ka tsy hitampody fa nodimandry, sira latsaka an-drano ka tsy hiverina intsony.
Nandao ny fandria-mafana izy ka hamonjy ny rangolahy, nivoaka ny varavaran-kazo ka hiditra ny varavaram-bato. Mafy tokoa raha mafy, mangidy tokoa raha mangidy ny misaraka aman’aina sy namoy havana tahaka izao, nefa raha mahita anareo tonga marobe manotrona ny velona sy mandevina ny maty toy izao dia manamaivana ny fahoriana tokoa. Tao ireo izay tsy nitandro hasasarana sy nahafoy ny asa aman-draharaha, nanome tanana ny fianakaviana nandritry ny andro nahaory, tao ireo izay nitondra ny teny mamy fampiononana sy ny teny fampaherezana avy amin’ny Soratra Masina, ka nanao tongotra miara-mamindra sy tanana miara-mandray ary fo miara-mitempo tamin’izy mianakavy.
FISAORANA NY MPANDEVINA : Tonga ianareo, tompoko, tsy kely nasesiky ny lehibe na lehibe nasesiky ny henatra fa sitra-po nasesi-pitiavana. Tonga tsy nahalavi-tany, tsy nitandro hasasarana, nandao ny asa aman-draharaha satria aleonareo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana. Hoy ny hafatry ny farafara nandrian’ny maty, ny hazo silaky ny sampy, ireo tapaporohana sisa tsy may manao hoe : Misao-jato, hono, tompokolahy, misaotr’arivo, hono, tompokovavy. Lehibe ianareo ka tsy azon’izy ireo atelina fa raha izao ataonareo izao dia sitraka sy telina tokoa. Sitraka enti-matory, hono, tompoko ka hovaliana raha mahatsiaro. Tsy mba mifanody amam-paty anefa isika fa ny tsara indray no hifanodiavantsika amin’ny manaraka. Ny voninahitry ny velona tokoa no maro mpanotrona, ny voninahitry ny maty no maro mpandevina, ka heni-kaja ny velona ankehitriny ary tsara levenana ny maty noho ny fanotronanareo marobe toy izao.
FISAORANA NY VALALA MPIANDRY FASANA : Ho anareo valala mpiandry fasana sy fokonolona eto an-tanàna kosa, tsy avaham-pitia noho ny hafa akory ianareo tompoko, fa ianareo no antsoina andro dia andro, antsoina alina dia alina, tsy tontosa izao fandevenana izao raha tsy teo ianareo niady ny fasana, ary mbola hanidy azy ihany koa. Manolotra ny fisaorana sy fankasitrahana ho anareo ny fianakaviana, fa ianareo no trano fialofana raha tratr’orana, ianareo no lamba hitafiana raha tojo fanala, ary sakaiza tiana hilazana ny fahoriana. Koa manolotra ny variraiventy ho anareo, ho solon’ny menaka hihosorana sy savony hanasana ny tanana tompoko, ary mirary soa anareo ho ambinin-drary, ho ambinin-tsodrano.
Ankehitriny dia efa mbỳ antsoalana Itompokolahy, efa tsara toerana eo anilan’ireo raiamandreny nialoha lalana azy, koa noho ny fisaorana tahaka ny fary lava vany ka tsy lany hamamiana dia manantitra ny fisaorana eram-po eran-tsaina ho anareo rehetra ny tenako. Ilay Andriamanitry ny fiadanana anie hamaly soa anareo ka hanome izay rehetra irin’ny fonareo.
FANDRAVANA OLONA : Ary farany, noho isika zarain’ny tokantrano samy manana ny azy, maro ihany koa ireo adidy izay tsy maintsy hatrehana satria ny maty, hono, arahin-dambamena ary ny velona hipetrahan’ny adidy, isika ihany koa tsy afaka ny hijanona eto satria ny andro mihahariva, koa mirary anareo samy ho tody soa aman-tsara any an-tokatranony avy.
Ho solon’ny fanaterantsika ny fianakaviana any an-tokantranony sy hifanaovantsika veloma, dia hijoro etsy am-bavalalana ny fianakaviana ho raisin-tanana. Ireo valala mpiandry fasana kosa dia hanatanteraka ny fanidiana ny fasana.
Misaotra tompokolahy, mankatelina tompokovavy.
RABENANDRASANA Lalao François
25 Responses to Kabary famangiana manjo
rabe dit :	20 avril 2014 à 12:57	Misaotra betsaka amin’ny fizarana fa ilaina tokoa ny mamindra ny fomba tena Malagasy anay taranaka mba itohizan’izany. Mankahery ireo zay tsara sitra-po hanohy ny asa toa izao koa hamerina indray ny maha Malagasy an-tsika.
Répondre	Malala dit :	26 mars 2014 à 10:42	Miarahaba antsika rehetra. mankasitraka indrindra mizara sy mampahafantatra ny toy izao.
Fa ity misy fanontaniana kely, ndrao mba misy afaka mizara eto ny mahakasika ny famadihan-drazana ?
Ny kabary atao sy ny fomba rehetra arahina, fa misy karoka ataoko mahakasika an’izy io.
Dia mankasitraka mialoha anareo rehetra
Répondre	valera dit :	10 mars 2014 à 10:04	Misaotra betsaka anareo mizara izao kolon-tsaina sy fanabeazana maha malagasy antsika izao
Répondre	RANDRIANASOLO RENE PATRICK dit :	6 février 2014 à 17:37	Mankasitraka indrindra Tompoko amin’ny ezaka fifampizarana ataonareo fa manampy tokoa.
Répondre	BAZEZY JOSIANE dit :	26 janvier 2014 à 12:21	MISAOTRA ARY MANKASITRAKA NY VITANAREO. NY IRINA DIA NY HITOHIZAN’NY EZAKA IZAY EFA NATOMBOKA.
Répondre	RATOLOJANAHARY Mandresy ALFA dit :	10 décembre 2013 à 15:31	tena isaorana tokoa fa ilaina mintsy ny toy itony;fa raha mba azo atao tompoko dia mba asio kabary fohifohy mikasika ny fanambadiana . Misaotra betsaka
Répondre	RSH dit :	12 décembre 2013 à 11:39	Miarahaba antsika mpikirakira ny aterineto. Ny Site n’ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Vakoka dia manana kabary betsaka, indrindra momba ny Kabary am-panambadiana. Oh: azonao jerena ny « http://www.mcp.gov.mg/blog/divers-kabary-fanao-maka-vady-ivelam-poko-tohiny-2/#more-12124″
Répondre	Oceane MA dit :	21 novembre 2013 à 10:01	Misaotra indrinda tompoko,
Mahaliana ny mamaky ny kabary, fa mba mangataka koa raha azo atao ny kabary famangiana MARARY inona no lazain’ny mpamangy, inona no avalin’ny vangina?
Betsaka ny kabary ao amin’ny tranon-kala fa toa FANAMBADIANA sy MANJO ary FAMPAKARA-BADY avokoa.
Répondre	RABEMANANTSOA Jeanson Gabriel dit :	3 octobre 2013 à 11:41	Soa fa nisy ary mbola misy ianareo vato namelan-kafatra hampitoetra mandrakariva ny soa toavina malagasy. Isaorana ianareo ary aza mikely aina mampitoetra sy manandratra ny maha MALAGASY. Ny an’ny tena tsy atakalo
Répondre	RABARISOA Jean Olivier dit :	30 septembre 2013 à 09:19	Miarahaba anareo ary misaotra sahady amin’ny ezaka ataonareo amin’ny fampianarana sy fampielezana ny kolon-tsaina malagasy maniry ka maniry ihany koa ny hitohizan’izao zavatra izao satria harena ho an’ny malagasy rehetra io ary misy fananarana be dia be ho an’ny malagasy izay mbola mania amin’izao fianantsika ianao. misaotra tompoko dia Andriamanitra anie hanampy anareo hatrany amin’izay rehetra ataonareo
Répondre	RANDRIAMANANTSOA MANITRANIAINA FANIRY dit :	5 septembre 2013 à 09:03	misaotra tompoko fa ilaina tokoa ny toy ireny
Répondre	anicet dit :	11 août 2013 à 07:38	Misaotra indrindra tompoko fa tena ilaina tokoa ny toy itony
Répondre	Rhandy dit :	6 août 2013 à 07:06	Efa ela ny tenako no nitady an’io misaotra betsaka tompoko
Répondre	JERISON dit :	1 août 2013 à 09:04	Misaotra sy mankasitraka indrindra tompoko, ilaina tokoa ny toy izao ka mankahery hatrany amin’ny izay rehetra mbola ho ataonareo
Répondre	RANDRIANAVALONA dit :	20 juillet 2013 à 11:17	Misaotra betsaka tompoko satria betsaka mihitsy ny malagasy mila azy ity.
Répondre	RANDRIANAVALONA dit :	20 juillet 2013 à 10:45	Misaotra betsaka @ famoahana ny fomba malagasy tahaka itony. Matetika ny boky taloha maneho azy zara raha mahita.
Mety mba misy fangatahambady ve ?
Répondre	MAROSANDRATANA Andriniaina dit :	20 juillet 2013 à 09:56	Tena mankasitraka anareo mpamokatra itony momba ny kolontsaina itony fa mba mangataka ny kabary @ fomba hafa koa.
Répondre	Frédéric Ramandaniarivo dit :	2 juin 2013 à 06:41	Misaotra amin’izao ezaka izao. Mbola maro no azontsika atao momba ny kolontsaina.
Ny faniriako dia kolontsaintsika malagasy velona sy ho avy izy ity, fa tsy lazaina ho an’ny razana fotsiny ihany.
Répondre	RASAMOELINA Mamy dit :	17 avril 2013 à 10:33	Misaotra betsaka fa tena olona maro no mila ny zavatra tot itony eo @ fiainany andavanandro.
Répondre	Phil dit :	26 octobre 2012 à 06:32	Misaotra betsaka fa mba asiana ahinteny hafa indray raha mety misaotra betsaka
Répondre	rasamoelina dit :	19 octobre 2012 à 17:20	Soa nahita an’ity fa very ny boky nisy ny kabary isan-karazany!
Répondre	RANDRIANANTENAINA dit :	21 août 2012 à 09:35	Mba mangataka fomba fanomezana vola @ famadihan-drazana azafady!
Répondre	RABEMANANTSOA Jeanson Gabriel dit :	3 octobre 2013 à 11:44	Soa fa nisy ary mbola misy ianareo vato namelan-kafatra hampitoetra mandrakariva ny soa toavina malagasy. Isaorana ianareo ary aza mikely aina mampitoetra sy manandratra ny maha MALAGASY. Ny an’ny tena tsy atakalo
Répondre	RABEMANANTSOA Jeanson Gabriel dit :	3 octobre 2013 à 13:12	Soa fa nisy ary mbola hisy vato namelan-kafatra hitahiry sy hampiroboro ny hasin’ny maha MALAGASY; ISAORANA IANAREO ARY MIRARY SOA mandarkariva
Répondre	ANDRIAMAMPIONONA Mandroso Mahefa dit :	22 octobre 2013 à 09:39	Tena isaorana be dia be ianareo mizara izao kolon tsaina sy soa tovina antsika malgasy izay reharehantsika izao,tena efa ela no te hianatra hijoro haneho teny fa izao zavatra zarainareo izao dia tena anisan’ny mampahery ny tenako hisolo vava ireo ray aman dreny mba ho reharehan’izy ireo,misaotra tompoko.
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *	Nom * E-Mail * Site web Commentaire Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> " Le meilleur hommage que l'on puisse rendre à Mandela, c'est de poursuivre son œuvre" D. Kaberuka, Président BAfD Tena manimba ny Tontolo iainana sy ny Ala ny doro tanety sy ny doro ala. . . . Contact : Bibliothèque Nationale Ampefiloha BP 305 Madagascar Tél: +261 33 05 507 06